DF oo ka hadashay eedeyn la xiriirta doorashadii dalka oo ay QM u jeedisay Madaxweyne Xasan sheikh – Radio Daljir
DF oo ka hadashay eedeyn la xiriirta doorashadii dalka oo ay QM u jeedisay Madaxweyne Xasan sheikh
Luulyo 20, 2013 3:48 b 0
Nairobi, July 20- 2013 – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeyn culus oo loo jeediyey madaxweynaha dalka Xasan sheikh Maxamuud, kadib war-bixin dheer oo sanadle ah oo ay soo saareen guddiga dabagalka cunaqabatayna saaran Soomaaliya iyo Ereteria.
Qoraal shalayto ay shaaciyeen kooxda Qaramada Midoobey u qaabilsan xayiraada saaran Soomaaliya iyo Ereteria ee la yiraahdo Monotering Group, ayaa waxaa lagu sheegay in Xasan sheikh Maxamuud uu taageero dhaqaale ka helay dalka Qadar wakhtigii doorashada.
War-bixinta waxay iftiimisay in lacagtii uu Madaxweyne Xasan sheikh ku galay doorashada ay bixsay Dowlada Qadar oo dano gaar ah ka leh dalka, waxaana arintaasi lagu tilmaamay mid hir gashay, guddigu waxay sheegeen in Xasan sheikh Maxamuud uu dhaqaale fara badan u adeegsaday in la doorto.
Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Ing, Cabdiraxmaan yariisow ayaa arintaasi ka jawaabay, wuxuu ku tilmaamay war-bixinta soo baxday mid khatar ku ah howlaha shaqada ee ay hayso Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya.
Eng. Yariisow wuxuu daaha ka qaaday in Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ay baaris dheer ku samaynayso eedeynta loo jeediyey madaxweynaha dalka, iyadoo kadib bixin doonta jawaab rasmi ah oo la xiriirta eedeynta kooxda Qaramada Midoobey u qaabilsan dabagalka xayiraada hubka, waa sida uu hadalka u dhigay.
War-bixinta kooxda Monitoring Group ee Qaramada Midobey waxaa kaloo aad loogu falanqeeyey arimaha Soomaaliya, gaar ahaan Burcad badeeda, cunaqabayteynta hubka ee dalka, Argagixisada iyo musuq maasuq la sheegay in uu ku baahay gudaha Soomaaliya, war-bixinta oo ah mid dheer, ilaa haatan waxaa? laga bixiyey jawaabo horudhac ah.
USA oo Toddobaadka dambe marti-gelinaya wada-hladii nabada ee dalalka Isreal iyo Falastiin
Natiijooyinka tartamadii xalay ee dhexmaray dugsiyada sare ee ka qaybgaalaya barnaamijka Tartan iyo Tacliin